7 Best Day Njem Site Naples Na Italy | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Best Day Njem Site Naples Na Italy
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 06/03/2020)
Naples bụ a magburu onwe, quintessential Italian obodo. Ọ na-ejupụta na ugwu nta, ochie ụlọ, na ndị ọzọ na obere na cute ebube. Ọ bụ nnoo zuru okè Italian obodo ahụ maka onye ọ bụla chọrọ iji na-enweta ezigbo Italian mmụọ na nke kacha mma ụbọchị njem si Naples.
Otú ọ dị, na ọ bụghị ihe niile. I tosiri gaa Naples maka ebube pizzas ha na-eme. The pizzas abụghị kwa ụbọchị ụdị i nwere ike ịhụ n'ebe ọ bụla n'ụwa. The Napoli Pizza bụ ihe pụrụ iche na-anya isi a uto nke na-apụghị-adịkwa.
Ma anyị digress. Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na Naples, ị kwesịrị ị na-eji oge gị nile marveling na ịma mma nke obodo na-eri ha dị ebube Pizza. Ị nwekwara mkpa gaa gburugburu. Nke ahụ bụ n'ihi Naples obụrede mbụre ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mara mma gburugburu na niile nke Italy. Site oke Pompeii mkpọmkpọ ebe na ọmarịcha na nghọta ma ama Amalfi n'ụsọ oké osimiri - ị nwere ike ịhụ a otutu.
Ye emi ke ekikere, anyị chere na anyị ga-enyere gị aka site na-enye gị kacha ndepụta nke asaa ụbọchị kasị mma njem si Naples, Italy. Ka anyị malite:
1. Otu Of The Best Day Njem Site Naples: The Ruins Of Herculaneum
Anyị chọrọ ịmalite bụghị na ndị doro anya ma na-erughị doro anya. Herculaneum bụ obere ma ama na nwa nwanne nna nke Pompeii. The ugbu a ma ama 79 AD Ugwu Vesuvius gbawara ebibi ma Pompeii na ha gbara agbata obi Herculaneum.
Otú ọ dị, taa, niile ukpono gaa Pompeii. Fọrọ nke nta ọ bụla onye na ụwa maara ihe Pompeii bụ, ma nnọọ ole na ole maara banyere Herculaneum. Nke a bụ a nnukwu ihere ma ọ bụrụ na ị na-ajụ anyị.
Na mbụ, Herculaneum bụ ihe chekwara. Mgbe ị na-e, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị ụlọ na ndị ọzọ ncheta fọrọ nke nta na-emebibeghị.
Nke abụọ, Herculaneum na-adịkarịghị akarị n'ọtụtụ. Dị ka anyị na-ama kwuru, mkpọmkpọ ebe ndị a na- obere mara na-gara na obere na obere. Ọ bụkwa nta na mfe ịhụ n'ụzọ sara mbara karị.
Ileta Herculaneum bụ nnọọ mfe, dị ka ụgbọ oloko gaa ya si Naples ọ bụla hour ma ọ bụ otú. Ị na-adịghị ọbụna nwere ike iche banyere oge dị ka ị ga-enwe ọtụtụ ihe nke ya na-ahụ ndị a mkpọmkpọ ebe.
Ọ bụ ezie na Herculaneum bụ ihe mara mma, na echiche anyị, i nwere ike na-atụ uche Pompeii. Ọfọn, ụbọchị kasị mma njem si Naples mgbe niile nwere na-agụnye ma Pompeii na Herculaneum.
Obodo ahụ dum nke Naples bi na onyinyo nke ndi di ike Vesuvius gbawara. Otú ọ dị, naanị Pompeii nwere ezi-ekwu na ọ maara na ike nke Vesuvius gbawara. Ị pụrụ ịhụ ugwu mgbe na Pompei, na i nwere ike n'ezie ịghọta ike nke naanị ifịk ugwu mgbawa na Europe.
Mgbe ị na-aga Pompeii, mkpa ka ị ga-adị njikere. Ebe a bụ ebe ọzọ oke karịa ọtụtụ ndị na-eche, otú ị ga-aga n'ebe ahụ dị ka n'oge dị ka i nwere ike. Na n'elu nke, ma ọ bụrụ na ị na-aga ke ndaeyo, ọ bụ nnọọ na-ekpo ọkụ, ya mere na ị ga-mkpa iji mee ka nza nke mmiri.
Otú ọ dị, na-na Pompeii bụ mfe akụkụ. Ị nwere ike ngwa ngwa iru ya si Naples via ụgbọ okporo, nke na-aga n'ebe nile ụbọchị.
3. Otu Of The Best Day Njem Site Naples: Ugwu Vesuvius gbawara
ndammana, dịghị nleta Naples nwere ike izu ezu enweghị ịhụ Vesuvius gbawara. Ị n'ụzọ nkịtị nwere ike ghara ịga na-enweghị ịhụ ya n'ihi ya oke size nke a pụrụ hụrụ si fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla Naples.
Otú ọ dị, i nwere ike kacha mma na-enweta ya na-site n'ebe di anya, ma site na guzo ya. Ugwu bụ nnọọ ogologo, ma i nwere ike ka na-haziri ahazi tour na soro bulie onu ke otu awa ma ọ bụ obere. Ị ga-ahụ ya aka, ma ahụmahụ na ị ga-ahụ n'elu bụ kpamkpam kwesịrị ya.
Iji ruo Ugwu Vesuvius gbawara, niile ị chọrọ bụ na-a ngwa-ngwa ụgbọ okporo ígwè si Naples na-ewe gị nso na ala na Ercolano Scavi ojii. Mgbe ahụ gị mkpa iji otu n'ime Vesuvio Express ụgbọ ala na-aga na-amalite mgbe nke moderately ịma aka ibugo onu.
Pescara na Naples Ụgbọ oloko
The dum Amalfi Coast bụ naanị na-arịọ na-hụrụ. Ozugbo ị na-aga ebe, ị ngwa ngwa na-aghọta ihe mere. The oke ọnụ ọnụ ugwu na-atụ egwu, na ịma mma nke oké osimiri bụ enweghị atụ nye.
I tosiri iri a ụgbọ okporo ígwè nọkwasi ma Sorrento ma ọ bụ Salerno. Mgbe ahụ ị nwere ike na-a ụgbọ ala ma ọ bụ ịgbazite ụgbọ ala na-aga n'elu obere ụzọ na-agazu Amalfi n'ụsọ oké osimiri.
Positano ziri ezi n'etiti n'ụsọ oké osimiri na bụ ihe kasị mara mma obodo na ya. Ọ bụrụ na ị na mgbe hụrụ foto ọ bụla nke obodo na Amalfi Coast, ị yikarịrị hụrụ Positano. The ama na gburugburu obodo kwesịrị, dị ka ebe ndị mara mma bụ breathtaking.
Power Ụgbọ oloko na Naples
Salerno na Naples Ụgbọ oloko
Taranto na Naples Ụgbọ oloko
5. Otu Of The Best Day Njem Site Naples: Sorrento
Sorento bụ a obere obodo na-anọdụ na-abụghị n'akụkụ nke Amalfi n'ụsọ oké osimiri. Ọ bụ otú nso Naples, na i nwekwara ike nnọọ mfe iru ya site na obodo ụgbọ okporo edoghi.
The obodo obụrede mbụre a di na nwunye nke na-eti osimiri na a ebube ochie obodo. Ọtụtụ ndị mmadụ gaa Sorrento, bụghị n'ihi na oké osimiri na-emenye ụjọ ọnụ ọnụ ugwu, ma ndị mere. Sorrento bụ n'ezie a quintessential ochie Italian obodo. Ọ dị nnọọ obere karịa Naples na nwere na ezi ochie Italian spirit naanị obere Italian obodo nile nke Negeb nwere ike.
Na n'elu nke, ị kwesịrị maa gaa Sorrento na otu n'ime gị mma ụbọchị njem si Naples n'ihi Capri. Isle nke Capri dị nso na na bụ nnọọ otu n'ime ndị kasị mara mma obere agwe-etiti ị ga-ahụ.
Foggia na Naples Ụgbọ oloko
Tivoli na Naples Ụgbọ oloko
Temoli na Naples Ụgbọ oloko
Lecce na Naples Ụgbọ oloko
Ọtụtụ ọmarịcha agwaetiti gbaagburugburu Naples. Otú ọ dị, nke kasị nnọọ mma na otu onye bụ Ischia, na ebe a bụ ihe mere:
Ischia bụ kasị agwaetiti na Bay of Naples
Ischia nwere ya niile: osimiri, thermal mmiri, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na nnukwu ụlọ na
Ọ bụ ebe kacha mma ntụrụndụ na Naples. I nwekwara ike nweta ya ngwa ngwa site na-ewere a ụgbọ mmiri si n'etiti Naples.
Ha adịghị akpọ nke a oke 1200 ụlọ n'obí ndị Italian Versailles n'efu. n'obí jupụtara na nnukwu staircases na bụ a UNESCO World Heritage Site. Ị ga-ahụkwa lavish eze ụlọ na a collection of presepi - Christmas cribs of Naples.
Na mkpokọta, ị gaghị na-ezighị ezi site na ịga na oke n'obí. Ị nwere ike na-a ụgbọ okporo ígwè si Central ojii na Naples na-esi na Caserta ojii. N'obí bụ naanị a obere ije emesia.
Naples na Caserta Ụgbọ oloko
Salerno ka Caserta Ụgbọ oloko
Ike Caserta Ụgbọ oloko
Bari ka Caserta Ụgbọ oloko
Ya mere, e i nwere ha, asaa ụbọchị kasị mma njem si Naples. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie na-enwe mma nke Naples, mkpa ka ị na-aga na ndị a niile njem. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ihe, na-eche free kọntaktị Save A Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Best Day Njem Site Naples Na Italy” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-naples%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Daytrips europetravel italyvacation Naples Naples Tranride ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelitaly traveltips